नयाँ वर्ष लाग्यो‍, घुम्ने रहर जाग्यो ! – My A1 News
नयाँ वर्ष लाग्यो‍, घुम्ने रहर जाग्यो !
शनिबार, चैत्र ३०, २०७५ उज्यालो अनलाइनबाटLeaveaComment on नयाँ वर्ष लाग्यो‍, घुम्ने रहर जाग्यो !
काठमाण्डौ : ‘डाँडा पाखा चउर हरिया देखिए पालुवाले, बोकी ल्यायो बकुल वनको बास मिठो हावाले’ राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले वैशाख महिनाको निकै नै सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ । प्रकृतिले नयाँ आभुषण पहिरिने समय हो यो ।
रङ्गीबिरङ्गी फूलहरुले हिमाल पहाड तराईमा नयाँ श्रृङ्गार थपेको हुन्छ । कोइलीले वैशाखलाई डाकिसकेको छ, नयाँ वर्ष आइसकेको छ ।
नयाँ वर्षमा धेरैले आफूमा नयाँपन ल्याउने प्रयास गर्छन् । नराम्रा बानीलाई छाड्दै राम्रा बानीको अनुशरण गर्ने संकल्प गर्छन् । कोही पुराना पीडा भुलाउन र कोही नयाँ याद बटुल्न घुम्न जान्छन् ।
त्यसो त हिजोआज नयाँ वर्षमा घुम्न जाने संस्कृति बढ्दो छ । नयाँ ठाउँ घुमेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न चाहनेहरु पनि धेरै छन् । तपाईं पनि कतै घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने घुम्नलायक तल उल्लेख गरिएका ठाउँका बारेमा केही कुरा थाहा पाउनुहोस् ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका डाँडाकाँडातिर हाइकिङमा जाँदा पनि त्यत्तिकै रमाइलो भइहाल्छ । जताततै हरियाली छाएको छ । गहुँ पाक्नै लागेको छ । तोरी फुलेर गह्राहरु पँहेलपुर भएका छन् । कोइलीको कुहुकुहुसँगै प्रकृतीले पनि नयाँ वर्षको मधुर राग फिजाइरहेको छ…। नयाँ वर्षको उत्साहसँगै प्रकृतिमा रमाउनुहोस् । सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना । # उज्यालो अनलाइनबाट
यस्ता छन् तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनुका १० फाइदा
आहा ! धौलागिरिको आँगनमा रत्नेचौरको तोरीबारी (फोटोफिचर)
शनिबार, माघ १२, २०७५ एवान न्युज
मनै लोभ्याउने इलाम
शनिबार, कार्तिक २४, २०७५ एवान न्युज